INkonzo yabaThengi elula | Martech Zone
Yikholwe okanye ungakholelwa, ayisoloko iyintengiso, iiBlogs, iiMiyalezo eziNtsholongwane, njl. Ngamanye amaxesha iba yinkonzo enkulu kubathengi. Ndinewotshi yeFossil ekufutshane kwaye endiyithandayo kuba abantwana bam bayithengele mna usuku olunye lokuzalwa. Ndiyathemba ukuba ihlala ngonaphakade. Ibhetri ihlala unyaka okanye emibini. Ibhetri yam iphelile kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo kodwa bendihlala ndinxibe iwotshi. Kuvakala ngathi sisidenge kodwa ndiyenzile kuba xa ndiyijonga ndicinga ngabantwana bam… kwaye ukuba ndiqhubeka nokujonga iwotshi ime, ndiyakhumbula ukufumana ibhetri.
Kumazantsi omsebenzi wam ngu Iintsimbi ze Windsor (Icala lasentshona leMeridian nje emazantsi eSangqa). Andizange ndinyathele apho (hey… ndinguTata omnye oneminyaka engama-38 ubudala, ndifuna ntoni ubucwebe?) Kodwa ndagqiba kwelokuba ndibone ukuba bazokundifaka ibhetri.
Njengoko ndandingena emnyango wangaphambili, kweza umfazi oswiti kwaye wabuza ukuba angandinceda na. Ndamxelela ngewotshi wayithatha kum wandinika ingcali yewotshi (?) Eyayineofisi kwalapho evenkileni. Kungaphelanga nemizuzu (ngokunzulu), wafaka ibhetri entsha, waseta ixesha, wacoca iwotshi, wayibuyisela kum. Wayenxibe enye yezo ziglasi zipholileyo zejewler kwaye washukuma ngoko nangoko ndingaboni nokuba wenze njani. Ndandinalo nje ixesha lokufunda inqaku elithunyelwe eludongeni eliqhayisa ukuba abantu abasuka e-Indianapolis basathemba kuphela iWindsor ukulungisa iiwotshi kunye neewotshi zabo. Andithandabuzi.
Ukuthengisa kunokufumana ishishini, kodwa inkonzo enkulu yabathengi ayinakuze isilele ukuyigcina.
Kungaphelanga nemizuzu ndibhatele imali (enkulu ye-ol $ 9, ibhetri ibandakanyiwe) ndaphuma ndisiya evenkileni. Umfazi owayendithambisile wandicela ukuba ndibuye ngokukhawuleza. Wowu.
Andiqinisekanga ukuba ndiza kuba nini kwisidingo sejewellery kwakhona. Nokuba andikho, uyazi apho ndiza kuba ngunyaka ukusukela ngoku xa ibhetri yam yokubukela iye yafa!
tags: Inkonzo eyenzelweindianapolisamatye anqabileyoiiglasi zamatye anqabileyonezacholoIjeweler zejeli